Ababoneleli beNFC Reader Writers kunye neFektri | Abavelisi bokubhala ababhali be China NFC
I-RFID Card Mifare Reader
Umgaqo-nkqubo: ISO 14443 Chwetheza ii-Chips: Mifare 1k, Mifare 4k, Mifare Ultralight C, NTAG203, njl. Iimpawu ze-HF Rhoqo: 13.56MHZ Iimpawu 1. Kuphephe ukwenza impazamo ngesandla 2. Gcina ixesha lakho ngokulula nangokufanelekileyo 3. Isimahla yokufaka umqhubi, ehambelana neWindows98 / 2000 / XP 4. Amandla kwi-USB Ukucaciswa 1. Inkxaso 13.56Mhz Frequency Card 2 I-5- 10cm yokuFunda kuLuhlu lokuFunda 3. I-USB esemgangathweni kwi-PC yoNxibelelwano lweNxibelelwano 4. Amandla kwi-USB 5. -10 ukuya kuma-70 C amaqondo obushushu ama-6. 6. Ngaphantsi kwe-100mA Ukusebenza ngoku 7 ...
I-AMR220-C1 iBluetooth ekhuselekileyo nfc mPOS Reader
I-AMR220-C1 ACS Safe Bluetooth® mPOS Reader ixhasa i-ISO 7816 Class A, B, kunye no-C amakhadi apheleleyo (5 V, 3 V, kunye no-1.8 V), kubandakanya amakhadi e-microprocessor ane-T = 0 kunye ne-T = 1 protocol, i-ISO I-14443 yohlobo lwe-A kunye no-B amakhadi a-smart, MIFARE®, FeliCa, kunye neethegi ezininzi ze-NFC kunye nezixhobo ezihambelana nomgangatho we-ISO 18092. Iyilelwe ngokukodwa ukuhlangabezana nemigangatho yokuhlawula kunye nokhuseleko, enje ngeMastercard® yokuNxibelelana, iVisa® yokuNxibelelana, iNqanaba le-EMV kunye neNqanaba lesi-2. YiApple Pay® kunye ne-Android Pay ™.
I-ACR1255U-J1 ACS ekhuselekileyo yeBluetooth® NFC Reader yenzelwe ukuqhuba ngokuhamba kwekhadi le-smart kunye nokusetyenziswa kweNFC. Idibanisa itekhnoloji ye-13.56 MHz yakutshanje yokunxibelelana neBluetooth® unxibelelwano.
I-ACR1255U-J1 ixhasa i-ISO 14443 yohlobo lwe-A kunye ne-B, i-MIFARE®, i-FeliCa®, kunye neethegi ezininzi ze-NFC kunye nezixhobo ezihambelana nomgangatho we-ISO 18092. Oku kwenza ukuba i-ACR1255U-J1 ifaneleke kuluhlu olubanzi lwezisombululo, njengokuqinisekiswa kwezandla ngaphandle kolawulo lokufikelela ngokwasemzimbeni nangokwengqiqo, kunye nokulandelwa kwempahla. I-ACR1255U-J1 inee-interfaces ezimbini: i-Bluetooth (ekwabizwa ngokuba yi-Bluetooth Low Energy okanye i-BLE) yokubhanqa ngezixhobo eziphathwayo, kunye ne-USB ekhawulezileyo yokusebenza kwe-PC. Ukongeza, inokufunda / ibhale ngesantya ukuya kuthi ga kwi-424 Kbps yekhadi le-smart kunye nokufikelela kwesixhobo seNFC.
Umfundi weKhadi leKhadi le-ACR35 NFC
I-ACR35 NFC MobileMate Card Reader sisixhobo esifanelekileyo onokuthi usisebenzise ngesixhobo esiphathwayo. Ukudibanisa itekhnoloji yamakhadi amabini kwenye, inika umsebenzisi wayo ithuba lokusebenzisa amakhadi emigca yemagnethi kunye namakhadi smart ngaphandle kwendleko ezongezelelweyo.
I-ACR1281U-C1 i-rfid smart card umbhali wokufunda we-nfc
I-ACR1281U-C1 i-DualBoost II sisizukulwana sesibini se-ACS's ACR128 DualBoost Reader. Isifundi esibonakalayo esingumbinisi esinokufikelela nakoluphi na unxibelelwano kunye namakhadi smart ngaphandle konxibelelwano ngokulandela imigangatho ye-ISO 7816 kunye ne-ISO 14443. I-ACR1281U-C1 i-DualBoost II yenza ukuba umntu adibanise izicelo ezizimeleyo nezizimeleyo zonxibelelwano kunye neetekhnoloji zonxibelelwano ngaphandle kwesixhobo esinye kunye nekhadi elinye. Ingasetyenziselwa intengiselwano kwi-intanethi ukulungisa iintlawulo ngokukhuselekileyo usebenzisa amakhadi etyala, kwaye inokusetyenziselwa ukongeza amakhadi angaqhagamshelwa kwiinkqubo zokuqokelela imali. Inika ukugqibezela kwinto yonke inye yekhadi edibanisa iintlobo ezininzi zezicelo zeekhadi ezikrelekrele kwikhadi elinye.
I-ACR1281S-C1 umbhali wekhadi le-nfc smart ikhadi
I-ACR1281S-C1 i-DualBoost II ngumfundi ophindwe kabini onokufikelela nakweyiphi na amakhadi oqhagamshelo kunye nonxibelelwano ngokulandela imilinganiselo ye-ISO 7816 kunye ne-ISO 14443. I-ACR1281S-C1 i-DualBoost II yenza ukuba umntu adibanise izicelo ezahlukileyo nezizimeleyo zonxibelelwano kunye neetekhnoloji zonxibelelwano ngaphandle kwesixhobo esinye kunye nekhadi elinye. Ingasetyenziselwa ukubhenka okanye ukuthengisa nge-e ukurhweba ukuhlawula okanye ezinye iintengiselwano ngokukhuselekileyo usebenzisa amakhadi etyala, kunye nokuqinisekisa amakhadi angaqhagamshelwa ukubonelela ukufikelela kwiindawo ezithile okanye kwiindawo zokusebenzela. Inika ukugqibezela kwinto yonke inye yekhadi edibanisa iintlobo ezininzi zezicelo zeekhadi ezikrelekrele kwikhadi elinye.
I-ACR1251U i-USB engabhaliswanga yombhali wokufunda we-nfc
I-ACR1251U USB NFC Reader II inikezela ngeempawu eziphambili ezinje ngokuhlaziywa kwefirmware, iSAM (iModyuli yokuFikelela ngokuKhuselekileyo), kunye nenkxaso yeethegi kunye nezixhobo zeNFC. Kukulungele ukusetyenziswa kwezonxibelelwano kunye nemisebenzi yokhuselo eyongeziweyo. Ngokusebenzisa i-SAM, ukungafani okungafaniyo kunye nokuqinisekiswa kokubambisana kuyenzeka, kuthintela ukuvezwa kwezitshixo kunye nokunciphisa ukubakho kwezitshixo ezibiweyo. Oku kubonelela ngenqanaba eliphezulu lokhuseleko ekusebenzeni ngaphandle konxibelelwano.
I-ACR1222L yeVisualVantage ye-USB NFC Reader eneLCD
I-ACR1222L sisixhobo se-PC esiDityaniswe ne-NFC sokuNxibelelana neFunda nge-USB njengombonakalo waso wokubamba. Iphuhlisiwe ngokusekwe kwitekhnoloji ye-13.56 MHz RFID kunye nomgangatho we-ISO / IEC 18092. I-ACR1222L inokuxhasa i-ISO14443 yohlobo lwe-A kunye namakhadi e-B, iMIFARE, iFeliCa kunye nazo zonke iintlobo ezi-4 zeethegi zeNFC.
I-ACR123U ibhasi engenakunxibelelana nfc Reader
I-ACR123U yinguqulelo ye-USB ye-ACR123S, indleko-esebenzayo, eguqukayo kunye nomfundi ongaqhagamshelani okrelekrele. Inokudityaniswa kwiitheminali ezikhoyo (zePoint-of-Sale) okanye iirejista zemali, ukubonelela ngokulula kwenkqubo yokuhlawula ngaphandle kwemali. I-ACR123U inyusa isantya sokuhamba kwiibalo zokukhangela, ngokwenza ukuba abathengi bazalise iintlawulo ngokuthepha amakhadi abo.
I-ACR123S ibhasi engenakunxibelelana nfc Reader
I-ACR123S Intelligent Contactless Reader yincwadi engabizi mali ininzi, ebhetyebhetye kwaye ekrelekrele engenakuqhagamshelwa enokuthi idityaniswe kwiitheminali ezikhoyo zePOS (Point-of-Sale) okanye iirejista zemali ukwenza lula inkqubo yokuhlawula ngaphandle kwemali. Iphuhlisiwe ngokusekwe kwitekhnoloji ye-13.56 MHz yokunxibelelana (RFID), ixhasa naliphi na ikhadi elinganxibelelananga elilandela umgangatho we-ISO 14443-4.
Umfundi we-ACR122U NFC
Isifundi se-ACR122U NFC sisifundi / ikhadi lombhali esinxibelelana nePC esingenakunxibelelana esenziwe ngokusekwe kwiTekhnoloji ye13.56 MHz yokuNxibelelana (RFID). Ukuthotyelwa komgangatho we-ISO / IEC18092 woNxibelelwano lweeNdawo ezikufuphi (i-NFC), ayixhasi i-MIFARE® kunye ne-ISO 14443 A kunye namakhadi e-B kuphela, kodwa nazo zonke iintlobo ezine zeethegi zeNFC.
Imodyuli yokufunda i-ACM1281U-C7 ye-USB engafakwanga neSAM Slot yenzelwe isekwe kwitekhnoloji ye-13.56 MHz yokudityaniswa okukhawulezayo nokulula kwiinkqubo ezingaphakathi.